Isifo Sikashukela Sesifo Sikashukela > Imithi
Isibindi Samagama Isifo Sokukhwehlela Esingeshukela: Ukwelashwa kwesifo sikashukela
Isifo sikashukela isifo sikashukela yisifo esiyinkimbinkimbi sohlelo lwe-endocrine, lapho isizinda se-hormonal somzimba siphazamiseka.
Lokhu kuholela ekunciphiseni amasosha omzimba, okubangela ukukhwehlela namakhaza kushukela.
Ukuthola ama-syrups angenabungozi namaphilisi ekhwehlela abantu abanesifo sikashukela akulula kangako, futhi lesi sihloko sizodingida ama-nuances wokukhetha imithi yokwelapha ukukhwehlela isifo sikashukela.
Izimbangela Zokukhwehlela kuma Diabetes
Ngaphambi kokuqhubeka nokuhlaziywa kwemithi efanelekile yesifo sikashukela ekhwehlela, kufanele uqonde izimbangela zokuvela kwayo.
Ngezimpawu ezisobala, ukukhwehlela kwe-allergic ne-viral kungahlukaniswa: okokuqala komile futhi kubuthakathaka, okwesibili kumanzi nge-sputum eningi.
Ukwakheka komuthi wokukhwehlela
Amacwecwe ekhwehlela angcono kuma-syrups esifo sikashukela, ngoba ukwakheka kwazo kuqukethe izinto ezimbalwa ezinqatshelwe kulokhu kutholwa.
Lapho ukhetha amaphilisi, kufanele unake ababukeli. Ukuba khona kwama-dyes, preservatives kanye nokunambitheka okuyingozi kuyinto engathandeki.
Ama-syrups ekhwehlela asebenza kakhulu, kepha, ngeshwa, iningi lawo livinjelwe kushukela. Lokhu kungenxa yokuba khona kwe-ethyl alcohol ne-sucrose, izinto eziyingozi kakhulu kulesi sifo.
I-ingress kashukela egazini ivusa ukugcwala ngokweqile kwe-insulin, futhi lokhu kubi empilweni. Kuhle ukwazi ukuthi ukukhwehlela ngezinhlobo 1 no-2 zesifo sikashukela kudinga ukwelashwa okuhlukile. Lokhu kuhlukana kwenzeka ngenxa yokuthi ngohlobo 1 i-insulin ye-hormone ayidalwanga umzimba, futhi ngohlobo 2 akubonwa ngamangqamuzana, kepha i-insulin ayidingeki ngaphandle.
Lapho ukhetha umuthi, ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe kuhlu lwe-contraindication.
Imithi yokukhwehlela yesifo sikashukela evunyelwe
Yize kunobunzima ekukhetheni umuthi ofanele wokwelashwa kokhwehlela, kusenokuthile okufanele ukhethe kukho. Kuhle ukukhumbula ukuthi le mithi ilwa kuphela nezimpawu zokukhwehlela, kwesinye isikhathi zifihla imbangela yangempela. Futhi, ukuze ukhwehlele i-allergic, udinga imishanguzo yakho.
Ngomkhwehlela owomile futhi omanzi, izinhlobo eziningana zamathebulethi zivunyelwe.
Isichasiso esingasetshenziswa isikhathi eside asisi umlutha.
Umphumela wayo uhlotshaniswa nohlelo oluphambili lwezinzwa (uhlelo lwezinzwa oluphakathi nendawo), ngesisekelo lapho uphawu lokukhwehlela lucindezelwe khona, oluphumelela kakhulu kulesi sifo. Udinga ukuthatha amaphilisi ama-2-3 ngezikhathi ezithile izikhathi ezi-3 ngosuku.
Umphumela walo muthi uyafana nowedlule. Inzuzo inkambo emfushane yokuphatha - izinsuku ezingama-2-3, amaphilisi angama-2-3 ngosuku.
Lesi sidakamizwa sithandwa kangangokuba umbuzo othi "Kungenzeka yini ukuphuza i-ACC yesifo sikashukela?" Kuza kaningi.
Ngokungeziwe esenzweni esikhulu esihlose ukuncipha i-mucus obukhulu epheshaneni lokuphefumula, i-ACC yesifo sikashukela sohlobo 2 ilusizo ngisho - ilwa nezifo zenhliziyo. Umthamo wansuku zonke ngu-400-600 mg, ithebhulethi kufanele ichithwe ingilazi yamanzi bese uphuza ngokushesha.
Lezi zibhebhe zingasetshenziswa futhi sikashukela, azinazimbumbulu eziyingozi, kepha zilwa ngempumelelo nokukhohlela okumanzi. Imithamo yayo isuka ku-50 iye ku-100 mg izikhathi ezingama-3-4 ngosuku. Ithebhulethi kufanele ichithwe (musa ukuhlafuna!) Isigamu sehora ngaphambi kokudla. Ithuba le Mukaltin lentengo ephansi kakhulu.
Leli thuluzi lihlanza kahle i-bronchi ye-sputum, inomphumela olindelekile.
Ungathatha izikhathi ezi-3 ngosuku, isifundo - kusuka ezinsukwini ezi-5 kuye kwezingu-14. Ine-contraindication eziningana ezingathi sína: isikhathi sokukhulelwa, ukukhohliswa (kwanoma yimuphi umsuka) nezilonda zepheshana lesisu.
Ukukhethwa kwama-syrups ekwelashweni kokhwehlela kumashukela sikashukela akukuhle njengoba kuphakathi kwamathebulethi, kepha izidakamizwa ezintathu eziphephe kakhulu zingahlukaniswa:
Le isiraphu isuselwa kwizithako zemvelo, eziklanyelwe ukukhulula amaspasms kanye nokulindelwa okungcono kwe-sputum.
Umthamo ngu-5 ml izikhathi ezi-3 ngosuku. Inkambo yokwelapha izinsuku eziyi-9. Contraindication ukukhulelwa nokungezwani komzimba kwizakhi.
Lesi sidakamizwa sikhonjelwa ekwelapheni ukukhwehlela okumanzi, kube nomphumela olindelekile.
Uhlobo lomuthi lungendlela elandelayo: thatha u-10 ml izikhathi ezi-3 ngosuku ezinsukwini ezintathu zokuqala, unciphise umthamo ngesigamu ezinsukwini ezintathu ezilandelayo (kuze kufike ku-5 ml). Thatha ngokudla namanzi amancane.
Umuthi usekwe ngamakhambi, awunazakhi zokwenziwa. Inkomba yokwelashwa: ukukhulula i-bronchospasm kanye nokukhwehlela isikhohlela. Shake ngaphambi kokusetshenziswa, kubantu abadala, i-10 ml izikhathi ezi-3-4 ngosuku.
Ama-syrups okwehlela kwesifo sikashukela awanconywa ngenxa yokuqukethwe kwawo ushukela omningi. I-Fructose lozenges emelana nezifo zokuphefumula imvamisa iqukethe ukunambitheka okungadala ukungahambi kahle komzimba.
Izindlela zokupheka zabantu
Njengoba unikezwe ubunzima bokukhetha umuthi omuhle wokukhwehlela kushukela sikashukela, unganaka izeluleko zemithi yendabuko.
Itiye le-ginger alithinti ushukela wegazi, okwenze ngokushesha ukuthi likhambi elithandekayo. Kuyakhuthaza ukungatheleleki futhi kusiza ukubhekana nesifo sikashukela. Ucezu oluncane le-ginger entsha lidinga ukusikwa futhi uthele amanzi abilayo. Ungaphuza izingilazi eziningana ngosuku, ukukhwehlela kuzoncipha ngokushesha.
I-Cinnamon itiye yehlisa ushukela wegazi futhi inciphise ukukhwehlela. Ukulungiselela isiphuzo esinjalo, kwanele ukuncibilikisa isipuni esingu-0.5 sesipuni engilazini yamanzi abilayo uhlanganise kahle. Ukwenza i-sweetening akunconywa.
Amafutha abalulekile eza ekusizeni izifo ezahlukahlukene. Usizo lwabo olukhulu ukuthi abaphikiswa kushukela. Ukwelapha ukukhwehlela, i-inhalation ingenziwa ngeqembu lamafutha e-coniferous.
Ijusi ye-radar ne-aloe iyinhlanganisela engenangozi esiza ukubhekana nokukhwehlela. Okubhekene nakho ukunambitheka okumunyu, kepha ukwelashwa kuyakufanelekela. Thatha kaningana ngosuku izingxenye ezincane.
Odokotela batusa ukunika isiguli isiphuzo esifudumele ngamanani amakhulu, ukuhlela ukuthula. I-inhalation ewusizo ngamazambane kanye ne-infusions yokwelapha yamakhambi. Imithi ene-ibuprofen neparacetamol akufanele ithathwe lapho kunesifo sikashukela. Izazi kufanele zifake i-guaifenisin ne-dextromethorphan.
Ngenxa yokuthi cishe yonke imishanguzo elindelekile idala umthwalo owengeziwe ezinso, odokotela banikeza ukukhetha izindlela zokupheka zokuqeda ukukhwehlela kwesifo sikashukela salezi zinhlobo ezi-1 nezingu-2. Kepha ukuhileleka futhi “ucabangele” izindlela zakho zokupheka ngokwakho akunakwenzeka.
Futhi, ngesikhathi sesifo, udinga ukubheka ngokucophelela izinga likashukela wegazi: yenza amasheke kuze kube ka-5 ngosuku.
Kwesinye isikhathi isiguli singadinga ukulungisa umthamo we-insulin (njengoba umkhuba ukhombisa, kaningi ngokwanda).
Akunconyelwe ukuzindla, njengoba isifo sikashukela sithambekele ezinkingeni. Zonke izinsuku zokubambezeleka nokulibala ukuya kudokotela kuyingozi empilweni.
Ukukhwehlela isifo sikashukela kudinga ukwelashwa ngokucophelela, okungelula ukuthi kusincome ngenxa yokucaciswa kwalesi sifo. Kungcono, Yebo, ukufuna usizo lwezokwelashwa ngokushesha, kodwa kuyadingeka ukuqonda ngokuzimela ukwelashwa kwalesi sifo. Ukwazi izidakamizwa ezifanele kuzovikela izinkinga ngenxa yokwelashwa okungafanele.
Ukwelashwa Komdlavuza Ushukela
Njengakwezinye izifo, ukwelashwa kwezifo zepheshana lokuphefumula eliphezulu kushukela kudinga indlela ehlukile kunaleyo evamile. Into ekhona ukuthi iningi lezidakamizwa ezitholakala emakhemisi zenzelwe abantu ngaphandle kwe-contraindication ethize, okubandakanya i-hyperglycemia ku-mellitus yesifo sikashukela.
Imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhwehlela eyenzelwe iziguli ezinesifo sikashukela kufanele ibe nelebula elicacile "elingenashukela" emaphaketheni abo, futhi kufanele ibe nesiqholo esisetshenzisiwe kusuka ohlwini oluphephile.
Lo mthetho usebenza kunoma yiliphi isiraphu, amaphilisi, kanye namaphawundi afakwe kufulawa, kuyilapho kungenjalo akukho mkhawulo wesigaba. Kungashiwo okufanayo nganoma yiziphi ezinye izindlela zokwelapha ukukhwehlela: uma umkhiqizo ungaqukethe ushukela futhi ungacasuli umgudu wokuphefumula noma isikhumba (ngokusetshenziswa kwangaphandle), kungabhekwa njengokuxazululwa kwabanesifo sikashukela. Ungakhohlwa indlela yasendulo yokulwa nokukhwehlela futhi, ngokuvamile, izifo zomphimbo - ukusetshenziswa ngezikhathi ezithile koketshezi ofudumele noma oshisa kancane, okuthambisa izimpawu. Le ndlela ilungele isifo sikashukela, ngaphandle kokuthi uma isiphuzo esivamile esimnandi esinoju noma ujamu singafakwa eceleni, futhi esikhundleni sazo, kwanele ukuphuza itiye elingafakwanga nelamula noma isiphuzo esenziwe ngoshukela okungena esikhundleni sikashukela.
Ngokuqalwa kwama-sweeteners okwenziwa azinzile ekwakhiweni komuthi futhi angaphansi kwe-glucose empeleni, amasobho angenawo ushukela angathinti izinga le-glycemia atholakala kuzo zonke izingxenye zabantu. Izidakamizwa ezinjalo zinconywa kuzo zonke iziguli, hhayi nje abanesifo sikashukela, ngoba ushukela owedlulele uyingozi ngisho nakumuntu onempilo, futhi ukukhwehlela kungalapheka ngaphandle kwawo. Ukuncintisana okwandayo emakethe kudala izimo ezinhle zokukhethwa kwesiraphu ngokuya ngezidingo zomuntu ngamunye futhi kunaka lokho akuthandayo nokuphepha. Phakathi kwemithi ethandwa kakhulu etholakala kumakhemisi namuhla, ama-syrups alandelayo wokukhwehlela angahlukaniswa:
Zonke zihlukile ekubumbeni nasendleleni yokuthonya ukugxila kwalesi sifo esibangela ukukhwehlela, futhi sisebenzisa nezinye izikhala ezinoshukela, kepha zonke azinangozi ngokulinganayo kushukela. Inzuzo yama-syrups kalula komthamo (usebenzisa isipuni esinamathiselwe), umphumela wokufaka okuthambile, kanye nephunga elimnandi nokunambitheka. Kuyafaneleka ukubheka kabanzi imininingwane yama-syrups adume kakhulu.
I-Mucoplant ikhiqizwa yinkampani yaseJalimani i-Doctor Theiss, nayo ekhiqiza imithi ehlukahlukene kanye namazinyo anezinto zokwelapha.
Enye isiraphu yokukhwehlela engenashukela kwabanesifo sikashukela yi-Linkas eyaziwa kakhulu, eyenziwe nguHerbion, futhi yize ingasebenzi kangako ngaphandle komncintiswano ochazwe ngenhla nguDkt. Ngokwesilinganiso esilingana, isiraphu iqukethe izakhi zemvelo zokwenziwa, kuyilapho ubumnandi bunikezwa yi-sodium saccharin kanye ne-sorbitol syrup. Ngokuqondene namakhambi okupholisa, lawo okukhishwe aklanyelwe ukulwa nokukhwehlela kwe-bronchitis, tracheitis kanye ne-pharyngitis, amelelwa ngamagama alandelayo:
amaqabunga e-adatode yemithambo,
izithelo ezinde zepelepele,
izimbali ezimnandi ze-violet,
izimpande ze-galangal enkulu
imbewu yemashi marshmallow,
izithelo zejusi elijwayelekile,
Njengoba ukwazi ukubona, uhlu lubanzi kakhulu, futhi ngenxa yalokho i-Linkas ibhekwa njengesidakamizwa sendawo yonke engabhekana nokukhwehlela okunzima kakhulu nokubuhlungu.
Imaphi amaphilisi engingawasebenzisa?
Imithi eminingi yokukhwehlela kanye namathebulethi enza ngokomgomo wokucasulwa kwe-Reflex isikhungo sokuhlanza ebuchosheni, obhekene, phakathi kwezinye izinto, ukukhiqizwa kwesikhwehlela yi-bronchi. Indlela efanayo isheshisa ukukhwehlela kwakhe futhi ithuthukise ukululama, noma kunjalo, uma ukukhwehlela kumile futhi kuyacasula, ukwanda kokuvama kwayo, kunalokho, akunasidingo futhi kuzoletha ukuhlupheka okungadingekile kwisifo sikashukela. Esimweni esinjalo, ukuthandwa kufanele kunikezwe amanye amaphilisi acindezela isikhungo sokukhwehlela ebuchosheni. Ngandlela thile, umuthi wokukhwehlela wesifo sikashukela ngendlela yamathebulethi ukhethwa yilezo ziguli ezokwazisa ukusetshenziswa nokulula kwenqubo ukwedlula ukunambitheka okumnandi nokwakheka komuthi. Ngaphezu kwalokho, imfuneko yokuqala lapho ukhetha amathebulethi kungukugcinwa kwekhono lokuwagwinya kabuhlungu, okungahlali kunjalo ngezifo zomphimbo.
Ngokuqondene nezinto ezithile, phakathi kwamathebhulethi antitussive, Codeine, Stoptussin, Glauvent, Tusuprex, Sedotussin nabanye bayadingeka kakhulu. Kepha iningi leziguli lisengozini enkulu yokuhlangabezana nesidingo semithi enomphumela we-expectorant ne-bronchodilator, nezidakamizwa ezinjenge-Mukaltin, Thermopsis, Bromhexine, Ambroxol, ACC, nezinye ziyanconyelwa zona.
Ezinye izindlela zokwelashwa
Ngaphandle kokungabaza kochwepheshe abaningi, izindlela zabantu zokulwa nokukhwehlela azilahli ukubaluleka kwabo kubantu, okucaciswa ngokutholakala kwabo, ukushibilika nokucaca kwabo. Izindlela ezithandwa kakhulu zihlukaniswa njengama-topical futhi zifaka ama-rinses ahlukahlukene, inhalations noma i-compress. Phakathi kokuqala - hlamba ngezixazululo ezilandelayo:
amanzi ngosawoti, usawoti ne-iodine,
amanzi ngejusi kalamula
ijusi le-beetroot ngeviniga,
ujusi karoti noju,
ama-decoctions asebenzisa i-licorice, i-calendula, i-chamomile, i-eucalyptus, i-coltsfoot.
Uma ucabanga ukuthi akudingekile ukugwinya izingxube ezinjalo, akukho noyedwa kuzo othinta izinga likashukela wegazi, ngakhoke ukufakwa koju ekwakhiweni akuyona ingozi kwisifo sikashukela. Ukulungiselela ama-compress, kuyisiko ukusebenzisa izithako zendabuko impela: i-mustard powder, uju, ujusi we-radish nokudla okuhlukahlukene okushisayo, njengamazambane abunjiwe. I-compress isetshenziswa esifubeni noma umphimbo, ngemuva kwalokho bonga indawo ngethawula bese befudumeza i-bronchi.
Isiraphu yezingane nemithi yokukhwehlela
Imithi yokukhwehlela yesifo sikashukela ebekelwe izingane ihlukile ngokufana namasiphu “amadala” namathebulethi anokuqukethwe okuphansi (noma ukungabikho ngokuphelele) kwezinto zokwenziwa. Ukugcizelelwa kokuhlanganiswa okunjalo kusebusweni bemvelo, futhi ngenxa yalokho izingcingo ze-plantain, i-ivy, izimbali zemallow, i-mint nezinye zisebenza njengento esemqoka esebenzayo. Ngaphezu kwalokho, lapho kwakha izingane izingane izidakamizwa, kungokwesiko ukulalelisisa ngokunika umuthi ukunambitheka nephunga elimnandi ukuze kuphenduleke ngokwanele ekuthini yizingane. Okufanayo kusebenza ekuphaketheni kwabo, khona-ke kufanele kube okugqamile futhi okukhangayo enganeni ukuze yesabe ngomuthi. Ngokuqondene namaswidi, iningi lamasishu noma amanye amalungiselelo ezingane ngokuzenzakalelayo akhiqizwa ngezinsizakalo zemvelo zoshukela noma zokwenziwa, ngenxa yokukhathazeka okuthe xaxa ngempilo yezingane.
Kuhlangana ngani ukukhwehlela nesifo sikashukela?
Ukukhwehlela akusona isifo, kepha indlela yomzimba yokusula imigwaqo ye-mucus, i-allergen, noma izingcezu zokudla eziwela kuyo ngengozi.
Esimweni lapho ukukhwehlela kubanda, abanesifo sikashukela badinga ukunakwa okwengeziwe, kungakhathalekile ukuthi uhlobo lokuqala noma lwesibili sikashukela esigulini. Njengoba kubanda umkhuhlane we-hypothermia, okunikeza umthwalo owengeziwe emzimbeni, izinga likashukela wegazi liyakhuphuka. Futhi, ukusetshenziswa kwama-syrups ejwayelekile kanye nama-syrups okokhwehlela kuthinta le nkomba, ngoba ifaka ushukela. Ukwanda kweglucose yegazi kuyingozi kushukela. Uma ukukhwehlela kuhlangene nesifo esithathelwanayo, khona-ke umzimba ulwa namagciwane, ukhiqiza inani elikhulu lama-hormone. Ukushintshwa kwesizinda se-hormonal kusithinta kabi isenzo se-insulin emzimbeni. Ngakho-ke, isiguli kufanele siqaphe le nkomba, siyibheke njengokubalulekile njalo emahoreni ama-2, kodwa hhayi ngaphansi kwezikhathi ezi-3 ngosuku.
Ukukhwehlela kwe-allergic ku-diabetes
Ukukhwehlela okuhambisana nokusabela komzimba kwenzeka ngenxa yokucasulwa kwezono yi-allergen engene emgudwini wokuphefumula. Amanye ama-antihistamines athinta isenzo se-insulin emzimbeni, okuvusa ukwanda kweglucose yegazi. Ngakho-ke, isiguli kufanele sibheke i-allergist futhi sikhethe izidakamizwa ezingaphikiswa kwishukela.
Isifo sikashukela senza kube nzima ukuhamba kwezifo, ngakho-ke lapho kuvela izimpawu zokuqala zomkhuhlane, kufanele uqale ukwelashwa. Ukwelashwa okukhethiwe ngokungafanele kubambezeleka umkhuhlane ojwayelekile futhi kuholele ekunyukeni okungapheli kwamazinga kashukela egazini. Kulesi simo, i-ketoacidosis yenzeka. Ngakho-ke, umuthi obandayo wesifo sikashukela kufanele unqunywe ngokubonakalayo:
Isilindelo esikhethekile sabashukela sinqunyelwe ukwelapha ukukhwehlela. Akufanele afake ushukela notshwala. “Ama-Atts” kwisifo sikashukela asiza ekwelapheni ukukhwehlela nje kuphela, kodwa nezinkinga zemithambo yegazi.
Akunconywa ukwehlisa izinga lokushisa nge-Ibuprofen, ngoba kunciphisa ukusebenza kwe-ejenti ye-antidiabetic futhi iphakamise izinga likashukela wegazi. IParacetamol nayo isetshenziswa ngokuqapha ngabanesifo sikashukela abanezinkinga zezinso.
Ukuphuza uketshezi oluningi ukugwema izinkinga ezinkulu.
Wonke umuntu onesifo sikashukela kufanele akhumbule ukuthi uma kwenzeka kuba nezifo ezihlanganyele, i -ororant kanye nezinye izidakamizwa zokwelashwa kufanele zinikezwe udokotela kuphela, ngoba ukuzelapha kungaba yingozi empilweni.
Isiguli esinesifo sikashukela kufanele sikukhuthalele kakhulu ukuqapha impilo yakhe. Ngesikhathi sobhubhane lomkhuhlane, ukuvakashelwa emicimbini enabantu abaningi kuyagwenywa. Ukunciphisa ingozi yokutheleleka, kunconywa ukugqoka imask ekhethekile. Ngaphambi kokuqala kwenkathi yasekwindla-ebusika, kungcono ukuthi ugonywe umkhuhlane, kepha qiniseka ukuthi uhlanganisa inqubo nodokotela wakho ngaphambi kwalokho. Uma ukutheleleka kungavinjelwa, kufanele ulandele imithetho elandelayo:
Gada ushukela wegazi okungenani izikhathi ezi-3 ngosuku, futhi kaningi uma kunesidingo. Lokhu kuzosiza udokotela ekutholeni ukunemba kwendlela enqunyelwe yokwelapha.
Sebenzisa isiraphu yokukhwehlela ekhethekile engenashukela yabanesifo sikashukela.
Ukuphuza amanzi amaningi akusizi kuphela esigulini esinesifo sikashukela, kodwa nakumuntu ongahlushwa yilesi sifo.
Ungakhohlwa ngomsebenzi wokuzivocavoca nokudla okhethelwe isiguli esithile. Ukuvimbela lesi sifo kulula kunokuphulukisa nokugwema ubunzima. Ngakho-ke, kufanele uhambisane nemithetho yokuhlanzeka hhayi kuphela kwabanesifo sikashukela, kodwa futhi nawo wonke amalungu omndeni. Uma kunezingane endlini, qiniseka ukuthi zigeza izandla zazo ngemuva kokuhamba emgwaqweni. Indlela yokuphila enempilo, hhayi amaphilisi, isihluthulelo sempilo yomuntu wonke.
Izici zenkambo yokukhwehlela kwiz Diabetes
Noma iyiphi inqubo yokutheleleka nokuvuvukala emzimbeni iholela ekuphazamisweni kwezinqubo ze-biochemical ezingeni lamaselula. Lokhu kuvame ukuholela ekwandeni koshukela wegazi, okudala ingozi yezinkinga.
Ukukhwehlela isifo sikashukela i-mellitus kuyingozi ngoba lesi simo sihambisana nokukhishwa kwezinto ezisebenzayo emzimbeni ukuze zilwe nalesi sifo. Lokhu kuvimbela i-insulin ukuthi yehlise i-glucose egazini.
Abantu abanomlando wesifo sikashukela benqatshelwe ngokuphelele ukukhetha ama-ejensi ekhemisi ukuzelapha ngokwabo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kuma-syrups, ukumiswa, okuqanjwa kwawo kuqukethe ushukela nezithasiselo zokudla ezikhulisa ushukela egazini.
Ekushiseni okuphezulu komzimba, ukudakwa kanye nokukhwehlela okukhulu, iziguli ziyelulekwa ukuba zizimele zilinganise amazinga kashukela njalo emahoreni angama-3-4 nge-glucometer. Ngokwanda okuqhubekayo kwezinkomba, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha.
Ukukhwehlela okuphathelene nesifo sikashukela kuvame ukuhambisana nokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukuhlanza, ukuphazamiseka kwesitulo (isifo sohudo), ukugcwala kwegazi ngenxa yokudakwa. Ukuvimbela imiphumela enjalo futhi wehlise nobunzima bamkhuhlane ojwayelekile, udinga ukuphuza uketshezi oluningi, kuze kufike kumalitha ayi-1.5-2 ngosuku. Lokhu kuzosusa ukomisa.
Ngesikhathi sokwelashwa kokukhwehlela, kubalulekile ukuqhubeka nokuthatha amaphilisi kashukela nokujova i-insulin.
Ama-nuances ekukhetheni nasekusebenzeni potions
Ukwelashwa kwesikhohlela kubandakanya ukusetshenziswa kwama-ejenti ahlukahlukene kanye nokwakheka, elinye lawo yi-syrup. Ngokunikezwa kwezimpawu zesifo sikashukela, kubalulekile ukuthi le ngxenye yokwelapha ingafaki ushukela, ongavusa ushintsho olungathandeki kumanani kashukela. Kungakho, ngaphambi kokuqala inkambo yokutakula, kunconywa kakhulu ukubonana nodokotela wesifo sikashukela ozokutshela ukuthi yimaphi amaswingidi azosiza hhayi kuphela ekwelapheni ukukhwehlela, kodwa futhi nokugcina amanani eglucose egazi elifanele.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi okungenani ama-90% ezidakamizwa awafaki kuphela ushukela noma izingxenye zotshwala, kodwa nezinye izinto ezingasizakali kakhulu kumuntu onesifo sikashukela. Kungakho inqubo yokukhetha isiraphu inconywa kakhulu ukuba isondele kakhulu. Ekhuluma ngalokhu, basho okulandelayo:
kuhlu lwezakhi zesiraphu, akumele kube nezinto ezisebenzayo njengezidakamizwa ezibangela umphumela wokwelashwa,
kubalulekile ukwenza isiqiniseko sokuthi izinto ezingasebenzi azikhona, okubandakanya udayi, izinyibilikisi, ukunambitheka nabanye abaningi,
ukuba khona ngisho kwenani elincane lezakhi ze-Ibuprofen namanye ama-ejenti akufiseleki, ngoba kungavusa ukwanda koshukela wegazi.
Kungakho kunconyelwa kakhulu ukuthi isifo sikashukela mellitus silungiselele ama-potions uku-oda okukodwa kusuka kulezo zingxenye ezithi, ngokolwazi, ziwusizo kakhulu. Kuvunyelwe futhi ukusebenzisa izidakamizwa ezifana ne-Dextromethorphan ne-Guaifenesin, engeke ibe nomthelela ekhuphukeni koshukela wegazi, kodwa bayasebenza ngokwabo.
Noma imuphi umthamo owedlulele ungaba yingozi futhi ungabulala ngisho emzimbeni wesifo sikashukela.
Uma kungenzeki ukukhetha isiraphu yokukhwehlela enjalo nje, ezoba usizo kuleli cala elithile, kunconyelwa ngokuqinile ukukubuyisa ngamakhambi emvelo. Ikakhulu, ochwepheshe banaka ukusetshenziswa kwezinyosi ngokulinganisela. Kuliqiniso, kuyadingeka ukukhetha izinhlobonhlobo zemvelo, ngoba akubandakanyi ukunqotshwa nezinye izakhi ezingaba yingozi emzimbeni wesifo sikashukela. Ukusetshenziswa koju kufanele futhi kube nemikhawulo, ngoba lo mkhiqizo ungathinta nokwanda koshukela wegazi.
Isilungu esiphumelele ngokulinganayo sesiraphu yokukhwehlela okungenashukela kwabanesifo sikashukela singamathiphu asemithini wamakhambi. Inzuzo yabo ilele ekwakhekeni kwemvelo, okungathinti ushintsho kushukela wegazi. Ngaphezu kwalokho, amagama anjalo ngokunembile ashesha futhi ngaphandle kwezinkinga adonswa ngumzimba womuntu. Izakhi ezahlukahlukene zingasetshenziswa ku-herbal tee, kepha kubalulekile ukukhumbula ukuthi akufanele zivuse ukungahambi kahle komzimba.
Imvamisa, abanesifo sikashukela basebenzisa iminen noma i-lemon balm, chamomile, calendula nezinye izitshalo noma amakhambi. I-rose inja ayisona isitshalo esidumile kulokhu, evumela hhayi kuphela ukuqeda ukukhwehlela, kepha futhi ukuthuthukisa umsebenzi womzimba, kanye nokusheshisa imetabolism. Ingxenye eyengeziwe yetiye enjalo ingaba usinamoni, okwandisa ukunambitheka futhi okunomthelela omuhle ekunciphiseni ushukela. Kodwa-ke, kufanele isetshenziswe ngamanani amancane. Ungasebenzisa lelo tezi nsuku zonke izikhathi ezimbili kuya kwezintathu, uma kunemiyalo ekhethekile evela kudokotela, khona-ke leli nani lingabaluleka kakhulu.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwesiraphu yokukhwehlela eyenza sikwazi ukulwa nengxaki ekhombisa ukubanda okuvamile.
Ukuze uqiniseke ukuthi ukhetha i-potion efaneleke kakhulu, kunconywa ngokuqinile ukuthi uthintane nochwepheshe.
Ukubuyekezwa okusheshayo kwemithi yokukhwehlela engenashukela
Osokhemisi basungule amafomula akhethekile angavezi okuqukethwe ushukela kuma-syrups wokukhwehlela, ngenkathi umsebenzi wabo wekhemisi unganciphi. Lezi izidakamizwa eziphephile eziqondiswe kwabanesifo sikashukela njengengxenye yokwelashwa okuphelele kokutheleleka ngegciwane kohlelo lokuphefumula. Onke angamalungu eqembu lama-mucolytic agents, anciphisa i-sputum ewugqinsi ne-viscous futhi aba nomthelela ekukhutshweni kwawo ngokushesha kupheji lokuphefumula.
Ukwakheka kwalesi sidakamizwa kufaka phakathi isixazululo se-sorbitol 70%. Luwuketshezi olungenamibala, omnandi ongenakho ukuthambekela kokwenza ikristali. Kulokhu, into engeyona i-carbohydrate, ayiqukethe ushukela. Ngakho-ke, kuphephile impilo yabantu abanesifo sikashukela.
ILazolvan isidakamizwa esenziwa ngamakhemikhali. I-ambroxol yezithako ezisebenzayo ithuthukisa ukukhishwa kwama-pulmonary surfactants, ithuthukisa ukukhululeka kwezindlala. Ngenxa yalokhu, ukuphuma kwesikhwehlela kusuka emgudwini wokuphefumula kuyenziwa lula, ubulukhuni bokukhwehlela buyancipha.
Akunemikhawulo yobudala ekuphuzeni umuthi. Isiraphu iphephile kwabesifazane abakhulelwe ku-2nd ne-3rd trimester. Amacala okweqisa izidakamizwa awaqoshwa.
UGedeliya ulungiselela amakhambi wemvelo. Isithako esikhulu esisebenzayo sesiraphu kukhiphe i-ivy iqabunga. Phakathi kwezingxenye ezisizayo, iqukethe nekhambi le-sorbirol 70%, elinikeza ukunambitheka okumnandi kulo muthi.
Izakhiwo eziphambili ziyimfihlo (i-dilute sputum, yehlisa ukukhiqizwa kwayo) kanye ne-antispasmodic (ikhulula ukungezwani kanye nokuqina kwemisipha yokuphefumula).
Isiraphu kaGedelix yokukhwehlela ngaphandle koshukela inqunyelwe kwiziguli ezinomlando wesifo sikashukela. I-5 ml koketshezi iqukethe i-1.75 g ye-sorbitol, ehambelana ne-0,44 g ye-fructose noma i-0,15 XE (isinkwa unit kuwuphawu lokulinganisa inani lama-carbohydrate ekudleni).
Umuthi awuchaziwe ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa. Umuthi ukhonjiswa ezinganeni kusuka eminyakeni emibili.
I-Linkas yikhambi lokukhwehlela elisuselwa kwizithako zamakhambi. Isiraphu senziwe ngesisekelo sokukhishwa kwe-licorice, i-marshmallow, i-violet, i-pepper ende, ukuqhakaza kwe-onosma, ihisopi officinalis, i-jujube.
Ukunambitheka okumnandi kwesiraphu kunikezwa yi-saccharase, okuyingxenye yesodium. Kusetshenziselwa ushukela okwenziwe ngobumba, isengezo sokudla esinezikhathi ezingama-300-500 sinoshukela omnandi kakhudlwana. Umuthi uvame ukunconywa ukuthi usetshenziswe yibo abanesifo sikashukela ekudleni kwabo.
I-Saccharin ayingenwa emzimbeni futhi ichazwa ingashintshiwe, ngakho-ke ayithinti kabi izinqubo ze-biochemical, ayikhulisi izinga le-glucose egazini.
I-Linkas yisikhumbuzi esinqunyelwe, esinqunyelwe uma kukhona i-viscous, okunzima ukuhlukanisa isikhohlela ku-bronchi. Umuthi ukhonjiswa ukusetshenziselwa kusuka ezinyangeni eziyi-6 ubudala. Inkambo yokwelapha izinsuku ezingama-5-7. Umuthi ubekezelelwa kahle yiziguli. Ezimweni ezingavamile, kuvela ukungezwani komzimba - i-urticaria, ukuqubuka kwesikhumba, ukulunywa, i-angioedema.
I-Tussamag isiraphu engenawo ushukela esuselwa ku-thyme (thyme). Ukuqanjwa kufaka i-sorbitol 70%.
I-phytopreparation isebenza njenge-expectorant, iguqula ukukhwehlela komile kube ngumswakama, okhiqizayo, futhi kuthuthukise ukuqedwa ngokushesha kwe-mucus kusuka ku-bronchi.
I-Syrup inokuphikisana okuthile:
izingane ezingaphansi konyaka owodwa
ukwehluleka kwe-hepatic and reso,
ukwehluleka kwenhliziyo esigabeni sokuboleka.
Lapho welapha iziguli ezinesifo sikashukela, kuyadingeka ukuthi unake i-1 tsp. umuthi uqukethe i-1.85 g ye-sorbitol, elingana ne-0.15 XE.
Kuyinto isiraphu esilindelwe esuselwa kukukhishwa kwamaqabunga e-ivy. Esikhundleni sikashukela, iqukethe isisombululo se-sorbitol. I-2,5 ml yesiraphu iqukethe i-0,963 g ye-sweetener, elingana no-0.8 XE.
Umuthi ubekelwe izinqubo ezinamandla zokutheleleka nokutheleleka ezindleleni zomoya, ezihambisana nokukhwehlela.
Kunconywa ukuthatha iProspan kusuka eminyakeni emi-2, kepha kuvunyelwe ukunquma isiraphu ezinganeni (ngokusho kwezinkomba nangaphansi kokuhlolwa kwengane).
Uma imithamo ebekiwe ingabhekwanga, kuqhamuka izimpawu ze-overdose - isicanucanu, ukuhlanza, ukuphazamiseka kwesitulo, kwesinye isikhathi kwandise ukungabekezeleleki kanye novalo.
I-Syrup uDkt Uxhaxha ngo-plantain ngaphandle koshukela
Ukulungiselela ngesisekelo semvelo okunomphumela wokulindela. Kuqukethe uvithamini C, kusiza ukunciphisa ukuvuvukala. Yabela njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi kwe-bronchitis, tracheitis enzima ukuhlukanisa is sputum.
Ukwakheka kwalo muthi kufaka phakathi i-sorbitol syrup. Kuyisengezo sokudla, i-sweetener okungeyona i-carbohydrate. Simnandi amahlandla ama-2 kunoshukela owenziwe ngesaha.
Lapho uthatha isiraphu, phuza amanzi amancane. Ibhodlela elivulekile ligcinwa esiqandisini. Isikhathi sokwelashwa nomuthi singamaviki angama-2-3.
Contraindication - ukuphazamiseka okusebenzayo kokusebenza kohlelo lokugaya ukudla, ukukhulelwa, ukungabekezelelani ngakunye.
Yonke imithi yokukhwehlela echazwe ngenhla yesifo sikashukela iphephile ezigulini. Izithasiselo (ezingene esikhundleni sikashukela) eziyingxenye yokwakheka azithinti izinkomba ze-glucose yegazi, azibambi iqhaza ezinqubweni ze-biochemical kanye ne-metabolism, zidalulwe zingashintshiwe emzimbeni. Ngokuya ngezinqubo zokwelashwa, ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi noma izimpawu zokweqisa ngokweqile akunakwenzeka.
Isicelo ekwelapheni isiraphu yesikhokho uLazolvan
Isiraphu yeLazolvan ayinawo ushukela. Isakhiwo esikhulu esisebenzayo yi-ambroxol hydrochloride. Le ngxenye yesiraphu ikhuthaza ukukhululeka kwe-mucous mucus ngamaseli emgudwini ophansi wokuphefumula.
Ukusetshenziswa kwomuthi kusheshisa ukuhlanganiswa kwe-pulmonary surgonant futhi kuthuthukisa umsebenzi we-ciliary. I-Ambroxol isiza ukunciphisa isikhohlela futhi isisuse emzimbeni.
Leli thuluzi lisetshenziselwa ekwelapheni ukukhwehlela okumanzi, okubangelwa ukukhuthaza ukukhiqizwa kwesikhwehlela kanye nokwenza lula ukususwa kwalo kusuka ku-lumen yendlela yokuphefumula.
Ukwakheka kwesiraphu ngaphezu kwengxenye esebenzayo kufaka izinto ezilandelayo:
Umuthi ukhonjiswe ukuthi usebenza kakhulu lapho usetshenziselwa ukwelapha izinhlobo ezahlukahlukene zokukhwehlela. Ochwepheshe bezokwelapha batusa kakhulu ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa:
esimeni sokuthuthukiswa kwezindlela ezahlukahlukene ze-bronchitis,
ngesikhathi sokwanda kokhwehlela komoya asthmatic,
uma kwenzeka bronchiectasis.
Imiphumela emibi lapho usebenzisa lo muthi ukwenzeka kokuphazamiseka kwendlela yokugaya ukudla, ukubukeka kokungaphenduki komzimba kwenye yezakhi zomuthi. Njengomthetho, ukusabela komzimba uzibonakalisa ngesimo sokuqhuma esikhunjeni.
Kunconywa ukusebenzisa umuthi kuphela ngemuva kokuthola izeluleko zikadokotela.